Ndo Microsoft, echere m na m na-esi isi Oke! | Martech Zone
Ndo Microsoft, echere m na m na-esi isi Oke!
Fraịde, Ọgọstụ 18, 2006 Fraịde, Ọktọba 26, 2018 Douglas Karr
Mgbe m gbara akwụkwọ ozi ozugbo na akwụkwọ akụkọ, atụmatụ anyị dị mfe ma dị irè. Anyị nwere ike ijide ndị mgbasa ozi anyị aka iji usoro mmemme anyị na-enye site na ịbelata ọnụego mgbasa ozi ha. Anyị nwere usoro mmemme ozi ziri ezi, mana ọnụahịa anyị dị elu nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere asọmpi ọ bụla. Atụmatụ ahụ gara nke ọma ma anyị wepụrụ azụmahịa na asọmpi anyị though n'agbanyeghị na ndị mgbasa ozi na-akwụkwu ụgwọ.
N'ime, nke a bụ naanị usoro nyocha nke ihe dị iche na asọmpi anyị. Ihe dị iche na anyị bụ na anyị na ndị mgbasa ozi a enweela mmekọrịta, naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ iji mee ya. Ekwenyesiri m ike na n'èzí na-ele anya, ndị mmadụ chere na anyị bụ ndị ọjọọ. Ma ọ bụ azụmahịa. Enweghị m mwute maka ya n'ihi na echere m na uru nke mmemme anyị karịrị ihe omume ọ bụla nke ndị asọmpi anyị. Anyị mere nyocha n'efu, jigide ọdụ data dị egwu, jikwaa aha ha Adịla Mail, wdg. Ọ bụ mmeri-mmeri.
Blog mmeghachi omume beta nwere ụfọdụ ozi gbasara Microsoft Internet Explorer 7 na nsonaazụ nnwale ya na ụkpụrụ CSS (Cascading Style Sheet). Nsonaazụ dị egwu. Microsoft nwere ike ịga n'ihu na-elebara ụkpụrụ ịntanetị anya, ọ bụghị ịga n'ihu. Nke a nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu nsogbu maka ndị ọrụ, mana ọ bụ ọnọdụ dị egwu maka ụlọ ọrụ mmepe. Ọ bụrụ na ọdịiche ahụ agbasawanye na otu ihe nchọgharị si emeso ụkpụrụ, ọnụ ahịa nke ahụ na-eduga na ụlọ ọrụ ndị na-ekesa ngwa weebụ. Ha aghaghi iji nkwado di omimi karie nkwado nke onwe ha, na ikekwe otutu ihe di iche iche nke dabere na sistemu nke obula. Ug. Ogologo mmepe mmepe, ọtụtụ nchikota, mkpesa ndị ọzọ, wdg, wdg.
Yabụ… ọ bụrụ na ị bụ Microsoft na ị dị njọ, kedu ụzọ ị ga-esi bụrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ngwaahịa dị ala? Ikekwe ị ga-ekesa ya. Gịnị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ achọghị ya? … Ugbu a, na ị nwere onye ọ bụla tinye n'ọrụ mmelite akpaaka, nanị gosipụta nkwalite na Internet Explorer 7 dị ka oké egwu nwelite. Edozi nsogbu… oke nnabata nnabata nke ngwaahịa dị ala site na ike dị egwu.
Ihe jọgburu onwe ya bụ na m nwere mmasị na Microsoft, abụghị m onye Microsoft dị njọ Ihọd. Mana echere m na m na-anụ isi oke. Echiche m banyere Microsoft nwere ike ịgbanwe n'oge na-adịghị anya.
Budata Firefox, ndị bekee. Nke a ga-abụ agha.
Tags: onye na-eme ntanetịuka nkuchimicrosoft
Inweta Blog gi na “A-List”
Industrylọ ọrụ nkiri nkiri IV - Agwọ na ụgbọelu